Bhizinesi reMabhosi | Martech Zone
China, January 18, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndakaona nhau dzichiratidza rimwe zuva kuti GoDaddy achange achishambadzira mamwe makwikwi eSuperbowl. Timu yekushambadzira yeGoDaddy iri kunyatso kusundira muganho gore rino, ichiwana kutarisisa nekuendesa boka revashambadzi rakarambidzwa kutarisisa iyi superbowl.
GoDaddy iri kushambadzira pachena kupokana seKutsvaga kwavo Super Bowl XL. Iwe unowana yakanakisa nguva yenguva yezvishambadziro zvakarambidzwa kuona pa Superbowl kuburikidza yavo saiti. Segore rapfuura, iyo boob mushandirapamwe unoita kunge uri kukwevera kuzhinji kutariswa kweGoDaddy. Ndinoziva ndiri kuchengeta zvangu pavari, er, mushandirapamwe wekushambadzira.
Izvi zviri pachena kuti zvave zvinobudirira kushambadzira mushandirapamwe weGoDaddy. Ini ndinoshamisika kuti nei, zvakadaro. Ini handisi kuzonyepa, ini ndoda kuona izvi zvekushambadzira zvakanyanya semurume anotevera. Asi kutenga duraini kuburikidza neGoDaddy hakupi imwe yekuwedzera mukana kune iwo mabobs. Hapana zuva, hapana chikwangwani, hapana autographs, hapana kana chinhu ... kunyangwe ziso. Mushure mekutenga madomeni emaboobs, unosara uine bhizinesi. Chii chinonzi mabhero anotiudza nezve bhizinesi? Tarisa uone ese kushambadzira paGoDaddy.com. Pane chero mumwe wavo anotaura chero chinhu nezve bhizinesi chairo?
Wako domain registrar chisarudzo chakakosha. Ivo vanogadzirisa yako domain. Zvakafanana nebhangi rinotarisira mari yako. Ivo vanofanirwa kuvimbika, kuve neakakura maficha, uye kuve neakanakisa ekushandisa maturusi ekugadzirisa madomeni ako. Ini ndashanda naGoDaddy, vaviri vedu vatengi vane yavo domains inogarwa kuGoDaddy. Akanaka mabhero, lousy interface. Ndo zvese zvandinoziva nezveGoDaddy.
Zvinoshamisa kuti, Chitatu chapfuura ndakagamuchira runhare kubva kuna Ben Goldsmith, Affiliate Manager ku Dotster.com . Ben vese vakanditenda nekutsigira Dotster kuburikidza newebhusaiti yangu mune zvichangobva romukova uye akaunza kwandiri kuti hukama hwangu nehukama pawebhusaiti yangu hunogona kunge husiri kushanda nemazvo nekuti ndanga ndichirevera saiti yandakabvisa muaccount yangu yekubatana. Wow… izvozvi zvinotonhorera. Ben akaita hanya nazvo zvekuti akasimudza foni kwandiri.
Handina kumbobvira ndave nemufaro wekutaura kune chero munhu kuDotster pachangu kare… izvo zvakakosha nekuti zvinoreva kuti zvipo zvavo zvinoshanda kwazvo. Ndakatora nguva ndichiudza Ben izvozvo pafoni. Mushure mehusiku hwandakava nerejista.com mwedzi yakawanda yapfuura, ndakaedza Dotster uye ndave ndichigara navo kubva ipapo.
Bhoobs angave akanaka kutarisa, asi Dotster.com inzvimbo yakanaka kunyoresa domaini rako ne… nguva.
Dotster zvakare ane akati wandei mamwe mapurogiramu uye masevhisi ekupa, kusanganisira VDS hosting. Tarisa ivo kana iwe ukawana mukana, ini ndinokuvimbisa kuti hausi kuzobata nemabobs ... kunze kwekunge zvakadaro zvakakosha kubhizinesi rako.
PS: Ndine hukama hwehukama hweDotster.com pane ino posvo. Ini ndoda kuona kuti mabobob anoshanda pamwe nemubatanidzwa kushambadza, futi.
Tags: kushambadzanaidadomain registrardomain registrationdotstergodaddy
Widget Mitemo, Tsigiro uye Kutengesa Mutero
Ndira 18, 2007 na1: 51 PM
Sezvakaita chero kushambadzira; unogona kuita mushandirapamwe wakanakisa, asi kana chigadzirwa chikayamwa, chinokundikana. (Hei, ngatione kuti Vista ichaita sei.)
Asi izvo zvakati, kana iwe ukaisa iwo maviri mabhana - iwo mabhobhu kubva kuGoDaddy uye dotster globe pointer. Iva akatendeseka: ndeupi waungatanga kubaya pane? 🙂
Ndira 18, 2007 na5: 17 PM
Bonde rinotengesa. Universal Yepasirose… chokwadi che tech, mitambo, varaidzo, chero chinhu!
Ndira 18, 2007 na8: 52 PM
Kubva pazita remusoro wenyaya, ndakafunga kuti ichi chichava chinyorwa nezve Congress 🙂
Ini ndinobvuma kuti mabobs anotengesa, asi ini handidi kuzombotenderera nematunhu angu. Ndanga ndiine DirectNIC kwemakore, uye vakagara vari vakuru. Ivo vakatoshanda kuburikidza naKatrina (ivo vakavakirwa muNO), uye vakashanda mabutts avo kubvisa zvese zvichimhanya.
Boobs, kana kwete mabhoobs, ini ndinonamira navo.
Ndira 18, 2007 na9: 59 PM
Martin: Um… dotster zvirokwazvo. 😉
Tony Chung: Zvinosuruvarisa asi ichokwadi… dambudziko riripo nderekuti hapana bonde, kungosimudzira.
Tony D. Clark: Zvirinani kuti aya maboobs ane chinangwa uye anotaridzika zvirinani!
Jan 27, 2007 pa 12: 03 AM
Kana iwe uchida chikonzero chaicho chakanaka chekusatarisana neGoDaddy, iwe uchaiwana pano.
Jun 11, 2007 pa 11: 05 PM
Zvakafanana kwandiri. Ndakafunga kuti ichi chaive chinyorwa chevamwe vezvematongerwo enyika. Iye zvino zvandinoziva ini ndinobvumirana zvachose ndinoda maboob ads kubva kuGoDaddy uye ini ndine madomaini angu ikoko futi.